बाबुरामलाई जनताको अपिल
२०७५ माघ २२ मंगलबार १४:५४:००
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसम्वाद अभियान शुरु गरेको आज एक हप्ता बितेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी माघ १५ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्मको लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) को १७७६ किमी यात्रामा रहेको छ । पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वका पार्टीका केन्द्रीय तहका नेतादेखि प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरुसम्म यस अभियानमा लामवद्ध भएका छन् ।
पार्टीले अंगालेको वैकल्पिक विचार र असल राजनीतिलाई जनसमक्ष प्रचारप्रसार गर्न र जनताको सुझाव गहण गर्नको लागि आयोजना गरिएको यस यात्रा अभियानमा जनस्तरबाट उल्लेख्य जनसहभागिता र उत्साह देखिएको छ । जनताले स्वस्फुर्तरुपमा नयाँ शक्ति पार्टीका अभियन्ताहरुलाई स्वागत तथा आतिथ्यता गरिरहेका छन् भने नेताहरुसँग विचार, विमर्श, सल्लाह, सुझाव दिइरहेका छन् । र, आफ्ना समस्या र गुनासोहरुपनि राखिरहेका छन् ।
मध्येपहाडी लोकमार्गको उद्गम थलो नेपाल भारतको सीमाक्षेत्र चिवाभञ्ज्याङबाट माघ १५ गते शुरु गरिएको यात्रा आज सातौं दिनमा आइपुग्दा प्रदेश १ मै यात्रारत छ भने ४० भन्दाबढी जनसभा, छलफल, अन्तर्क्रिया गरिसकेको छ । यात्रामा पार्टीको उद्देश्य आफ्नो पार्टीको प्रचारप्रसार र संगठन विस्तार होईन, समावेशी विकास र समृद्धिको खाका आम जनतासम्म पुर्‍याउनु पनि हो । जनताले उत्साहपूर्वक नयाँ शक्तिको विकास अवधारणा सुनेका छन् र सुझाव पनि दिएका छन् । हामीले यस लेखमा अभियानमा क्रममा जनताले राखेको विचार, धारणा र सुझावहरुको सन्दर्भमा केही राख्ने जमर्को गरेका छौँ ।
यतिखेर सत्ताधारी पार्टीहरु जनताको घरदैलोमा देखिएका छैनन् । जनताको दैनिकी उही कष्टकर अवस्थामा छ । विकास र समृद्धिको चर्को नारा दिने सरकारले कस्तो विकास ? कसरी विकास ? भन्ने अवधारणा जनतालाई दिन सकेको छैन । विकास र समृद्धि कुनै लोकको कथाझैँ होला भन्ने सोचिरहेका जनताको बीच कुनै शक्ति वा सत्तामा नरहेको सानो पार्टी र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नेता डा. बाबुराम भट्टराई विकासको अवधारणा लिएर यो मध्येमाघको जाडोमा जनताको घरदैलोमा पुग्दा जनताले चासोपूर्णरुपले हेरेका छन् । आफ्नै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रका नेताहरु सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा जुटिरहेको परिवेशमा डा. भट्टराई जनताको कुरा सुन्न आफ्नै घरदैलोमा आउँदा जनताहरु उत्साहित त छदैछन् आफ्नो दुखमर्का पनि राखेका छन् । यस अभियानले नयाँ शक्तिप्रति जनतामा जमाएको नकारात्मक धारणाको अन्त्य भएको छ भने यथार्थमा देश विकासमा निम्ति नयाँ शक्ति नै आवश्यक रहेको जनताले महसुस गरेका छन् ।
जनताको ऐनामा राजनीति
डा. बाबुराम भट्टराईको अवधारणामा तयार भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अहिले निर्माणाधीन चरणमा छ । र पनि यस लोकमार्ग बनेपछि व्यवसायिक रुपमा बस्तीहरुपनि धेरैमाथि उठेकोमा जनताले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाई भएको, गुणस्तरीय काम हुन नसकेको भन्दै स्थानीय ले गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सिमानापारी सिक्किमसम्म जोडिदिन पनि स्थानीले डा. भट्टराईसँग आग्रह गरेका छन् । डा. भट्टराईले प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री र सिक्किमका मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेर स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, देशको नेताहरुमा विकास, निर्माण र समृद्धिको एजेण्डालाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने एकमात्र नेता बाबुराम भएकोले देशको नेतृत्व लिने गरी शक्तिमा आउनको लागि जनताले आग्रह गरेका छन् ।
भरपर्दो विकल्पको खोजीमा नागरिक
नागरिक वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट दिक्दार देखिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वप्रति उनीहरुको विश्वास गुमेको छ । राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा बनेका छैनन् । तर अभियानमा रहेका नेताहरुको माझ जनताले आफुहरुले भरपर्दो विकल्प खोजेको बताएका छन् । जनताले पटकपटक विकल्पको रुपमा नयाँ पार्टीलाई सत्ता सुम्पिएपनि हालसम्म जनताको अवस्था सुधार नभएको राजनीतिक सुद्धिकरण नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नयाँ शक्तिलाई विश्वास गर्ने आधार के हो ? उनीहरुको प्रश्न छ । नयाँ शक्ति पार्टी विकल्पको लागि विकल्पको रुपमा मात्र होईन भरपर्दो विकल्पको रुपमा दिर्घकालमा देशको नेतृत्व सम्हाल्नेगरी अगाडी बढ्नुपर्नेमा स्थानीयबासीको जोड छ । नयाँ शक्तिलाई यो देशको नेतृत्व नै गर्नगरी जिम्मेवार भएर राजनीति गर्न र हस्तक्षेपकारी भुमिकामा अगाडी बढ्न जनताले आग्रह गरेका छन् । वैकल्पिक राजनीतिको उज्वल भविष्य देखेर पार्टीका नेताहरुपनि उत्साहित देखिएका छन् ।
विकल्प खोज्नेको लहर
अभियानका क्रममा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा प्रवेश गर्न चाहानको लर्को लागेको छ । जनताले नयाँ शक्तिलाई साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् । तर कसैलाई पनि पार्टी प्रवेश भने गराइएको छैन । किनकी यो संगठन निर्माण र पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम होईन । पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्– ‘हाम्रो यो पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम होइन । हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यक्रम मात्र पनि होईन । हामी त तपाईहरुको सुझाव सुन्न आएका हौँ । तपाईहरुको समस्या सुन्न आएका हौँ । असल राजनीति भयो भने जो जहाँ बाट राजनीति गरेपनि हुन्छ । मुख्यकुरा असल राजनीति हुनुपर्‍यो । देश निर्माणमा आवश्यकता अनुरुप हामी जनतामा आह्वान गर्नेछौँ । हामीलाई साथ दिनका लागि, त्यतिखेर हामीसँग लामबद्ध हुनुहोला ।’
देशको व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था नफेरिएकोले अब अवस्था फेर्नको लागि लड्ने पार्टी नयाँ शक्ति नै भएकोले नयाँ शक्तिलाई साथ दिन चाहेको जनसंवादको क्रममा स्थानीयले बताएका छन् ।
स्वःस्फूर्त स्वागत, आशासँगै अभिनन्दन
नयाँ शक्ति पार्टीको यस अभियानमा जनताले स्वस्फुर्त सहभागिता जनाएका छन् । ठाउँ ठाउँमा गेट बनाएर, औपचारिक कार्यक्रम गरेर, स्वागत तथा अभिनन्दन गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न पार्टी संयोजकलाई आग्रह गर्नुका साथै नेताहरुसँग विकास निर्माण र जनताको काम गर्ने सन्दर्भमा सल्लाह–सुझाव पनि मागेका छन् । स्वागतमा पार्टीका कार्यकर्ता मात्र छैनन्, कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकर्ता मात्र छैनन् । सबै पार्टी, समुदाय, जाति, वर्गका मान्छेहरुले स्वस्फुर्त रुपमा सहभागिता जनाएका छन् । कसैले पनि यसलाई केवल एक पार्टीको कार्यक्रमको रुपमा लिएका छैनन् । जनताले यसलाई देश बनाउने एउटा महाअभियानकै रुपमा बुझेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग
‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसम्वाद यात्रा–२०७५’ को नाम दिएर नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले गरेको यो यात्राले राजनीतिक वृतमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । नेपालको ठूला राजनीतिक दलको गिर्दो साख, जनताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको परिस्थितिमा नयाँ शक्ति गाउँगाउँ पुगेर स्वच्छ र स्वस्थ राजनीतिको विषयमा जनतालाई जागरुक गराउनु, असल राजनीतिक दल र नेतालाई जनताले चिन्न पाउनुले अन्य राजनीतिक दलभित्र पनि यस अभियानको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको जनताले चिन्न पाउनुले अन्य राजनीतिक दलभित्र पनि यस अभियानको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।
नयाँ शक्ति कुनै ठुलो दल होईन । सत्ता र शक्तिमा पनि छैन तर देशको विकृति, विसंगति र राजनीतिलाई सफा र सुद्धिकरण गर्छौं भनेर जनताको पीर, मर्का बुझ्न गाउँगाउँमा जानुले नयाँ शक्तिप्रति जनताको विश्वास, साथ र जनलहर पनि बढेको छ भने वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक राजनीतिको भविष्यको गोरेटो सुन्दर देखिएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक वृत्त, पत्रकार, बुद्धिजिवी र आम जनताको माझमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
सुझाव कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान
यतिखेर नयाँ शक्तिको जनसंवाद अभियान प्रदेश एकबाट तीनमा यात्रारत छ । यो यात्रा सातै प्रदेशमा पुग्नेछ । फागुन १५ गते बैतडीको झुलाघाट पुगेर यात्रा सकिने छ । अझै सयौं कार्यक्रमहरु हुनेछन् । हजारौँ जनसमुदायसँग भेटघाट, छलफल हुनेछ । अझै धेरै सल्लाह– सुझावहरु लिन बाँकी नै छ । सम्पूर्ण यात्रा सकिसकेपछि पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिको सन्दर्भमा कति परिमार्जन गरेर जानुपर्छ, जनताले भनेजस्तो पार्टी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर आगामी बाटो तय गर्ने छ । साथै जनताले नेताहरुमाझ राखेका समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने र समस्या समाधानकालागि पहल गर्ने । संघ सरकार मातहतमा रहेकाको हकमा संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा समस्या समाधानको लागि पहल गर्नेछ ।
पराजुली नयाँ शक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।